के तपाईं वेलेंटाइन दिवस गुलाब को 94% छूट मा खरीद गर्नेछन्? - Pandaily
फेब 15, 2022, 19:03अपराह्न 2022/02/16 02:34:52 Pandaily
रोमान्टिक मूल्य के हो?
भले पनि वेलेंटाइन दिवस किराया वृद्धिको मानक बिन्दुमा, मूल्य फरक पनि अचम्म छ। हालैको प्रेम दिवसको दौडान, शंघाईले 1568 युआन ($250) को लागि एक उच्च ग्रेड फूलहरु गुलाब को 99 बीम बेच्न को लागी। अनलाइन पनि यस्तै उपासना अभिव्यक्ति छ, 88 युआनको मूल्य, बटुलेको लागि धेरै उपयुक्त।
तर मूल्य निर्धारण को अंतर को 94% कसरि व्याख्या गर्ने?
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। लाखौं अनलाइन उपभोक्ता आवश्यकताहरू, ई-वाणिज्य प्लेटफर्मको माध्यमबाट व्यवसायको लागि मापन अर्थव्यवस्था सिर्जना गर्न, कारोबारले उपभोक्ताहरूलाई भुक्तानी गर्न लागत बचत गर्न सक्छ।
हरेक दिन, बारीमा, तर फूलहरूको लागि वार्षिक माग सिर्जना गरे, फूलहरूको नि: शुल्क नियन्त्रण गर्ने नयाँ उपभोक्ता प्रवृत्तहरू ट्रिगर गर्दै।
कम्पनीको डेटा अनुसार, 2021 मा धेरै फूल बिक्री 150% बढ्यो, पेल्विक बिक्री 60% बढ्यो। महिलाहरु लाई 65% देखि अधिक फूलहरु को खरीदारहरु को लागी, जसमध्ये धेरै को फूलहरु लाई एक विशेष अवसर को लागि नहीं खरीदते हो।
एक उदाहरणको रूपमा चोंगकिङ विश्वविद्यालय स्नातक सुश्री लुओ, त्यो यस वर्ष जनवरीमा अनलाइन थिए, ओरिएंटल लिलीको बीमले छात्रावास कोठालाई उजागर गर्न खरीद गर्यो। वा गुजाउ युआन, सुश्री युआन, उनले अडियो, माइक्रो ब्लगिङ, सानो रातो पुस्तक र अन्य सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा साथीहरूलाई आफ्नो आर्किड देखाउन अनलाइन हेर्न खोजे।
अन्य कृषि उत्पादनहरू जस्तै, धेरै फूल बिक्री अझै पनि पारंपरिक थोक वितरण प्रणाली मार्फत छ। फूल उत्पादकहरू, थोक विक्रेताहरूले अन्य थोक व्यापारीहरूलाई, · त्यसपछि खुदरा विक्रेताहरूलाई पाँच देखि छ कीस्केललाइटमा बेचेको छ। आपूर्ति श्रृंखलाको प्रत्येक चरणले थप लागत र उच्च मूल्यको कारण बनाएको छ।
तर फूल निर्माताहरूले आफ्नो वितरण विस्तार गर्न अनलाइन च्यानलहरू बढी जान्छन्।
गुआंग्डोंग शिगाउ शहर, चीनको ठूलो ठूलो आर्किड खेती क्षेत्र, त्यहाँ 5000 भन्दा बढी बिरुवा र nbsp;एक एकड़ जमीन रोपण क्षेत्र, 33 मिलियन बिरुवा बीउ को वार्षिक उत्पादन संग। त्यसपछि क्सी क्षेत्र 1000 र nbsp;एक एकड़ जमीनअनलाइन बिक्री पछि .
शिगाउ शहर आर्किड रोपण परिवार लिङ्ग वेबिनमा जन्मिएको थियो, सबैभन्दा छिटो सञ्जाल व्यवसायका अवसरहरू गुमाउन सबैभन्दा तेज छ।
अर्को हेर्नुहोस्:धेरै बुद्धिमानी कृषि प्रतियोगिताबाट, ब्ल्याकबेरीको कृषि तैनाती एआइ उत्पादकता र राजस्व बढ्छ
लिंग आफ्नो बुबा उपभोक्ताहरूलाई कसरी छनौट गर्ने र कसरी ब्रोकोली र अन्य विषयहरू छनौट गर्ने छनौट सहित उपभोक्ताहरूलाई व्याख्यान दिन दिनुहोस्। यी सभाहरू धेरै अनुयायीहरूलाई आकर्षित गरे र उच्च बिक्रीमा अनुवाद गरे। लिन अनुमान गर्दछ कि अब अनलाइन अर्डर अफलाइन बिक्री दस गुणा हो।
लाइभस्ट्रीमले अफलाइन बिक्री बिना प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया च्यानल प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, लिंग का पिता उपभोक्ता प्रतिक्रियामा कि उनीहरूले ठूलो आर्किड स्पेस सीमित छन्, छोटो सानो आर्किड किस्महरू परिचय।
जस्तै, ई-वाणिज्य फलहरु र सब्जिहरु को निर्माताहरु को लागि फूलहरु को आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाउन मा मदद र उपभोक्ताओं को लागत बचत गर्दछ।
निस्सन्देह, यो पछाडि प्रभावित हुन मद्दत गर्दछ। कसले आफ्नो जेबमा एक छेद जलाइनु पर्छ?